Thursday September 30, 2021 - 02:24:26 in Wararka by Super Admin
1- Wuxuu Ethiopia u dhiibay halyeey Soomaaliyeed Cabdikariim Sheekh Muse Qalbidhagax.
2- Wuxuu Ethiopia u saxiixay 1 saac gudahiis afar dekadood , heshiis aan baarlamaanka la horgeyn.
3- Wuxuu weeraray Xarunta Wadajir kadibna wuxuu laayay Saraakiishii ilaalada isagoo kobaha ku Aasay.
4- Wuxuu weerar uu ku qaaday beer ku taal Bariire ku dilay dad shacab ah oo Caruur u badnaa .
5- Wuxuu xilkii sifo sharci daro ah uga qaaday Gudoomiyahii baarlamanka Prof Jawaari.
6- Wuxuu biyaha iyo korontada ka jaray Gudoomiyahii 2aad ee baarlamaanka Mr Mursal kadib markii uu qabtay Mooshin ka dhana Farmaajo.
7- Wuxuu xilkii si aan sharci aheyn uga qaaday Ra’isulwasaarahiisii 1-aad Hassan Ali Kheyre.
Falalka nuucaana ee Maxkamad la horgeeyay waa dimbi ku filan in lagu Maxkamadeeyo si loogu xakumo Xabsi daa’in ama daldalaad.